QORMADA JIMCAHA: Ma Ogtahay in Marouane Fellaini uu noqday Laacibkii ugu Horreeyay oo MUSLIM AH oo….? – Gool FM
QORMADA JIMCAHA: Ma Ogtahay in Marouane Fellaini uu noqday Laacibkii ugu Horreeyay oo MUSLIM AH oo….?
Byare March 16, 2018
(England) 16 Maarso 2018. Qormadeena Jimcaha ee Usbuucan waxaan ku soo qaadaneynaa laacibka ku caanka ah Timaha Afraha ee uu sida wayn uga helo Jose Mourinho ee Marouane Fellaini.
Haddaba Ma Ogtahay in Joog dheeraha reer Belgium uu Noqday laacibkii ugu horreeyay oo MUSLIM ah oo Kabtan u xirta kooxda Manchester United.
Fellaini ayaa loo xiray Kabtanimada Red Devils kulan ay la ciyaareen Sunderland 9-kii Abriil 2017 markaa ay ku adkaadeen 3-0.
Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan iyo Marcus Rashford ayaa kulankaa goolasha u dhaliyay kooxda Jose Mourinho, balse Fellaini ayuu kulanka micno gaar ah u sameynayay maadaama uu Noqday Muslimkii ugu horreeyay ee kabtan u xirta kooxa ka arrimisa Old Trafford.
Congratulations to today’s Man Utd Captain @Fellaini on becoming their first ever Muslim captain 👍🏼 pic.twitter.com/wTXTSMLxoR
Waxyaabaha lagu xusuusto wiilka Muslimka ah ee Marouane Fellaini ayaa waxaa ka mid ah dhacdo qabsatay koobkii adduunka ee 2014 lagu qabtay dalka Brazil.
Joog dheeraha ayaa ka mid ahaa saddex Laacib oo Muslimiin ah oo qeyb ka ahaa xulka Belgium Mousa Dembele, Adnan Januzaj iyo Isaga.
Nasiib darrada Koobka adduunka sanadkaa ka qabsatay xiddigihii Muslimiinta ee ka qeyb galayay ayaa ahaa inuu ku soo aaday Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Dabcan markaad sooman tahay waxay ka dhigan tahay inaa maalinkii oo dhan cunno cuneyn isla markaana aadan biyo cabeyn taa oo khatar ku noqon karta ciyaartooy ku ciyaareysa dal leh Cimilada Brazil oo kale.
Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka iyo Valon Behrami oo matalayay xulka Switzerland iyo kubbad qaabeeyaha Jarmalka ee Mesut Ozil ayaa sanadkaa af cad ku sheegay inaysan Soomeyn bisha Ramadaan, sababo ay ku sheegeen caafimaadkooda iyo inuu saameynayo tayadooda ciyaarta taa oo aan farxad galin Bulshada Islaamka ah.
Balse, Marouane Fellaini oo ay iska dhaleen waalidiin u dhashay dalka Morocco ayaa isagu shaacin go’aankiisa taa oo ugu yaraan xushmad la dhihi karo.
"Si Xun iilama hadli kartid aniga.".-Messi oo INDHAHA u Shitay Garsoorihii dhax dhaxaadinayay kulankii Barca iyo Blues
DHAC-DHACAAYE: Saxaafadda Ingiriiska oo kabaha la dul martay Danny Welbeck